Interview | The FNG
တွေ့ ဆုံ မေး မြန်းမှုများ
February 18, 2014 by 21 South News
ByShibani Mahtani Photos from Aye Ne Win In retirement from politics, Gen. Ne Win and grandsons greeting Prime Minister of Singapore Goh Chok Tong, who made an official visit to […]
February 5, 2014 by 21 South News
သမ္မတ ဦးသိန်းစိန် အစိုးရ လက်ထက် တွင် အကျင့်ပျက် လာဘ်စား မှု ကို တိုက်ဖျက် မည် ၊ အစိုးရ ဌာန များ ၏ လာဘ်ငွေ တောင်း ခံ မှု များ ကို
(unnamed), ဘဏ် နှင့် ငွေကြေး, သတင်း ဆောင်းပါး, Interview
July 18, 2013 by 21 South News4Comments
တင်ကျော်ကျော်စိုး ၊ ၊လော်စစ်ဟန် ရဲ့ဘ၀ ကို ခြေရာ ကောက် တဲ့ အခါ မှာ အညတရ ကိုးကန့်– တရုတ် မိသား စု က နေ မွေးဖွား လာခဲ့ တာ ဖြစ် ပြီး ဆယ် ကျော် သက် အရွယ် […]
သတင်း ဆောင်းပါး, Interview, News
June 22, 2013 by 21 South News 25 Comments
Monday, Jul. 01, 2013 When Buddhists Go Bad By Hannah Beech / Meikhtila, Burma, and Pattani, Thailand His face as still and serene asastatue’s, the Buddhist monk who […]
(unnamed), သတင်း ဆောင်းပါး, Interview, News
April 9, 2013 by 21 South News
သတင်း ဓာတ်ပုံ သမား တစ်ဦး ရဲ့မိတ္ထီလာ မြို့ အသက်ဘေး အတွေ့အကြုံ
April 8, 2013 by 21 South News 8 Comments
မတ်လ(၂၂)ရက်ဝန်းကျင်လောက်က မိတ္ထီလာကို သတင်းလာယူတဲ့ မီဒီယာ အုပ်စုတစ်စုကို အဖျက်သမား အုပ်စုတစ်စုက မီးလောင်တိုက်သွင်းဖို့ ကြိုးစား ခဲ့တယ်။ အဲဒီထဲမှာ နိုင်ငံခြား
သတင်း ဆောင်းပါး, Interview
November 30, 2012 by 21 South News
နိုဝင်ဘာလ၂၉ ရက်နေ့ မနက် ၃ နာရီမှာ မုံရွာမြို့နယ် လက်ပံတောင်း တောင် ကြေးနီ စီမံကိန်း သပိတ်ကို အစိုးရ လုံခြုံရေး ရဲ တပ်ဖွဲ့က အင်အားသုံးဖြိုခွဲခဲ့ပါတယ်။ သပိတ်တိုက်ပွဲ ဆင်နွှဲနေတဲ့ ရဟန်းရှင်လူ ၁၀၀ ကျော် မီးလောင်
October 5, 2012 by 21 South News 1 Comment
Bill Keller: နိုင်ငံရေးကိစ္စတွေကို မမေးခင်မှာ သမတကြီးရဲ့ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ ကိစ္စတွေ ကို မေးချင်ပါတယ်၊ အမေရိကန်လူမျိုးတွေက သမတကြီးကို ကောင်းကောင်းသိပ်မသိကြသေးဘူး
အယ်(လ) ခွန်ဖန် ကို လုပ်ကြံခဲ့ သည့် ဇော်ဆိုင်း လွတ်မြောက်လာ
September 19, 2012 by 21 South News 1 Comment
KIA ကချင်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ရဲ့ ကွန်မန်ဒို လဖိုင်ဇော်ဆိုင်း ပြန်လွတ်လာပါပြီ။ သူက မြန်မာ့တပ်မတော်တိုင်းမှူးတယောက်ကို လုပ်ကြံမှုနဲ့ ထောင်ထဲမှာ ၂၇ နှစ် နေခဲ့ရသူပါ။
September 18, 2012 by 21 South News 1 Comment
(သတင်းထောက် ကိုညို က ဗမာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီ ပြောခွင့်ရ ရဲဘော်ဖိုးသံချောင်းနှင့် လက်ရှိနိုင်ငံရေးအခြေအနေအပေါ် ဆက်သွယ်မေးမြန်းချက်) မေး။ ဗမာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီ ဗဟိုကော်မတီဝင်၊ စစ်ကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်လည်းဖြစ် ရဲဘော်သုံးကျိပ်ဝင် ဗိုလ်ချုပ် ကျော်ဇောကို ပါတီခေါင်းဆောင်တယောက်အနေနဲ့ အသိအမှတ်ပြုမခေါ်တာ ဘာကြောင့်လို့ထင်မြင်လဲ?
ဒုသမ္မတ ဦးဥာဏ်ထွန်း ကိုယ်ရေးအကျဉ်း
August 28, 2012 by 21 South News 1 Comment
ဖခင် ဒုတိယတောအုပ် (သစ်တော) ဦးစိန်မောင်နှင့် မိခင်မူလတန်းပြဆရာမ ဒေါ်သိန်းတင်တို့က ၁၉၅၄ ခုနှစ်၊ ဇန်န၀ါ ရီ (၁၂) ရက်တွင် ပဲခူးတိုင်း၊ သာယာဝတီ ခရိုင်၊ ဇီးကုန်းမြို့၊ ဂုံးလမ်း
ဒီမိုကရေစီထက် အသွင် ကူးပြောင်းမှု အရင်ဖြစ်သင့်
July 8, 2012 by 21 South News
ပြီးခဲ့သည့်နှစ်က မြန်မာနိုင်ငံ၏လျင်မြန်သော နိုင်ငံရေးအရပြောင်းလဲမှုများ သည် ကမ္ဘာကြီးကို အံအားသင့်စေပြီး အပေါင်းလက္ခဏာဆောင်သော မှတ်ချက်များကိုလည်း ကျယ်ပြန့်စွာလက်ခံရရှိခဲ့သည်။
ဗကသများအဖွဲ့ချုပ် စတင်ပေါ်ပေါက်ကတည်းက ကိုင်စွဲလာခဲ့တဲ့ ဗကသရဲ့ မူ ၅ ချက်က ခေတ်နောက်ကျနေတယ်လို့တော့ မမြင်ဘူး
February 2, 2012 by 21 South News
အခု ဒီည ဆွေးနွေးမယ့် အဓိကအကြောင်းအရာကတော့ လက်ရှိ ဒီပွင့်လင်းမှုအချို့ မြင်လာရတဲ့ မြန်မာ့နိုင်ငံရေး အခြေအနေအောက်မှာ ကျောင်းသားသမဂ္ဂရဲ့ လှုပ်ရှားမှုတွေကို ကျနော်တို့ ဆွေးနွေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
လူငယ်ရေးရာ, Interview, OP / ED
နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသား များ လွှတ်ရန် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် တောင်းဆို | ထိပ်တိုင်ရင်ဆိုင်ရေး သည် သတင်းစာများ က စသုံး ခဲ့ခြင်း ဖြစ်
November 14, 2011 by 21 South News
နေအိမ် အကျယ် ချုပ် မှ လွတ်မြောက် လာပြီး နောက် တစ်နှစ် ပြည့် မြောက် သည့် အထိမ်းအမှတ် အဖြစ် မြန်မာ့ ဒီမိုကရေစီ ခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် က ယနေ့အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ ချုပ် ရုံး တွင် ပြု လုပ်သည့် သတင်း စာရှင်းလင်းပွဲ […]
(unnamed), Interview, News
၀င်းထွဋ် တာရာ ရဲ့မိဘမဲ့ ကလေးများ ရံပုံငွေ ဈေးရောင်းပွဲတော် | Photo |
လင်မယား စကားများ ရာ မှ လူအသေအပျောက် ရှိသည့် ရခိုင် ပြည်နယ် မငြိမ်သက် မှု ဖြစ်ပွား